Maxay ka dhigan tahay in labo Kooxood oo Ingiriis ah ay isugu yimaadaan FINAL-ka Champions League?? – Gool FM
(England) 09 Maajo 2019. Shaki kuma jiro in waqti dheer laga sheekeyn doono sida ay kooxaha reer England ee Liverpool iyo Tottenham ugu soo gudbeen Final-ka Champions League.
Reds ayaa habeen hore 4-0 uga soo adkaatay Barcelona xilli lugtii hore ee sami final-ka looga soo adkaaday 3-0.
Spurs oo iyana 1-0 looga soo adkaaday lugtii hore ee lagu soo ciyaaray gurigeeda ayaa misane labo gool lagu marsiyay qeybta hore ee kulankii xalay ka dhacay Holland.
Hayeeshee, laacibka reer Brazil ee Lucas Moura ayaa saddexleey ka kacay taa oo u suuro galisay in Tottenham ay markii ugu horreysay soo hiigsato kulanka kama dambeysta ee tartanka ugu xiisaha badan Yurub.
Waxaa Final-ka tartankan lagu ciyaari doonaa garoonka ay dhawaan uun dhisatay kooxda Atletico Madrid ee Metropolitano Stadium oo sidoo kale loo yaqaano Wanda Metropolitano, kulankaas ayaa la ciyaari doonaa 1-da bisha nasoo aadan ee June.
Haddaba maxay ka dhigan tahay in labo kooxood oo Ingiriis ah ay isugu soo haraan final-ka Champions League??
>- Waa markii labaad Taariikhda oo labo koox oo horyaalka Premier League ka dhisan ay isugu yimaadaan final-ka tartankan Champions League.
Horay waxaa Final-ka tartanka Champions League isugu yimid kooxaha reer England ee Chelsea iyo Manchester United sanadkii 2008 waxaana ku guuleysatay Man Utd, halka sanadkan 2019 ay isugu yimaadeen kooxaha horyaalka Premier League ka dhisan ee Tottenham iyo Liverpool.